अमेरिकामा स्बास्थ्य बिमा छनौट कसरी गर्ने ! - Enepalese.com
अमेरिकामा स्बास्थ्य बिमा छनौट कसरी गर्ने !
महेश भट्टराई ,मेरिल्याण्ड, २०७६ कार्तिक १९ गते ०:५६ मा प्रकाशित
November 1st to December 15th 2019.
Trump ले Obama health care plan २०१९ मा cancel गरे पछि Medical Insurance अनिबार्य गरेको छैन अर्थात Tax file गर्दा जरिबाना तिर्नु पर्दैन । तर केहि राज्यले भने आफ्नै नियम लगाएको छ ।
सामान्य insurance companies ले नाम जे दिए पनि Insurance तिन प्रकारका हन्छन ।
१ Basic plan – कम प्रिमियम , कम कभरेज
२ Standard – मध्य प्रिमियम र ठिकै कभरेज
३ Premium – धेरै प्रिमियम र धेरै कभरेज
छनौटको आधार :
१ मुख्य बिषय बिमा किन किन्दै हुनुहुन्छ ? आबश्यकता किन र कति हो ? गत बर्ष कति प्रयोग भयो ? कति बिरामी हुनुहुन्छ ? गत बर्षको डाक्टर र प्लान संग कति सन्तोष हुनुहुन्छ ?
२ प्रिमियम – by weekly वा monthly हो ? बर्षमा कति बुझाउनु पर्छ ? कभरेज के मा कति छ ? Dr visit, prescription, Co pay, diagnostic, deductible कति हो ?
३ बजारमा भएका plans को बारेमा राम्ररी बुझ्नुस र सोध्नुस – HMO, PPO
४ Out of pocket cost : co- pay, co-insurance, deductibles, Annual maximum cost बारेमा बुझ्नुस !
५ Plan of coverage benefits- के कति कभरेज हुन्छ र के कति स्बास्थ्य समस्याहरू कभरेज भित्र पर्दैन वा कति प्रतिशत मात्र कभर गर्छ बुझ्नुस !
६ Travel गर्दा अर्थात out of state or country जादा वा Emergency पर्दाको के कति कसरी कभर गर्छ बुझ्नुस !
७ Prescription drugs- copay, co-insurance र exclusive बारेमा बुझ्नुस !
८ Dental, vision, Mental health and chronic health care coverage बारेमा बुझ्नुस
क्यान्सर, Dialysis, दिर्घ रोगको कभरेज बारेमा पनि बुझि राख्नुस !
१ भाषाको समस्या भएमा दोभासे निशुल्क पाइन्छ !
२ मन नपरे कुनै पनि समयमा डाक्टर फेर्न सकिन्छ ।
३ मागेमा सबै Medical record- lab, x-ray, diagnosis को कपि निशुल्क दिनु पर्छ।
४ छोराछोरी लाई Family plan मा २६ बर्ष सम्म संगै राख्न सकिन्छ !
५ बर्षमा एक पटक Full health check up र preventative Treatment सबै जसो Insurance ले फ्रि मा कभर गर्छ !
६ Dental र Eye exam बर्षमा दुई पटक regular check up र preventative treatment cover गर्छ !
७ Eye/Dental उपचार University/College Teaching hospital हरूमा बिध्यार्थिहरूले फ्रि वा कम रकममा उपचार गर्ने गर्छन !
Know key Terms:
१ Premium – ईन्सुरेन्सको लागि प्रत्येक महिना तिरिने रकम
२ Deductible – हरेक बर्ष मेडिकलको लागि तिर्नै पर्ने रकम
३ Co pay – हरेक मेडिकल सेवा बापत तिर्नै पर्ने रकम
४ Out of pocket maximum- एक बर्ष भित्र deductible, copay, coinsurance तिरेको रकम। यो रकम मिट भए पछिको बाबि रकम त्यो बर्षको लागि Insurance company ले तिर्दछ ।
५ Net work – मेडिकल सेवा दिने डाक्टर,हस्पिटल, फार्मेसी र अन्य सेवा दिनेहरूको संलग्न समुह, जसमा रकम कम तिर्नु पर्ने हुन्छ
६ Out of network providers – समूहमा नपर्ने स्बास्थ्य सेबाहरू जसको सेवाको लागि बढि रकम तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
७ Co Insurance – तिर्नु पर्ने deductibles तिरे पछि बिमितले तिर्नु पर्ने प्रतिशत रकम
८ HMO – more affordable, Network coverage, Referral requires, less coverage, more restrictions
९ PPO -more flexible, more coverage, higher premium and deductible
१० HSA- Health saving account: Tax नतिरिकन स्बास्थ्य उपचारको लागि मात्र खर्च गर्ने गरि खोलिएको खाता
मेरो सुझाब :
१ यदि रोग लागेको बारेमा मनमा धेरै नै शंका उपशंका छ भने एक बर्षको लागि धेरै प्रिमियम तिरेर राम्रो Insurance लिने र out of pocket maximum पार्ने र सबै Diagnostic test हरू गराउने र अर्को बर्ष बाट सस्तो लिने !
२ यदि तपाई निरोगी हुनुहुन्छ भने Basic plan लिए पनि हुन्छ ।
३ दांत र आंखाको धेरै समस्या छ भने supplemental Insurance लिदा राम्रो !
४ Kaiser Permanente- एउटै ठाऊ बाट मेडिकलका सबै पक्षका सेबा Dr, lab, pharmacy, diagnostic, Emergency, online, 24/7 सेवा दिने हुनाले मलाई मन पर्छ !
५ Online service- per year/ per visit : healthtap.com घर मै बसेर सस्तो मुल्यमा तपाई video, voice, text द्दारा डाक्टर संग जांच गराउन, lab test, prescription र refers to specialist सक्नु हुन्छ ! $49/visit
६ सबै Insurance companies ले जसरी पनि बिमित लाई मुर्गा नै बनाएको हुन्छ । त्यसैले सधै आफै सचेत भै आफ्नो कभरेज र को पे बुझ्न जरूरि छ !
Standard: Higher the premium- higher coverage, lower the copay, Lower the premium- lower the coverage, higher the copay.
हरेक मानिसको आ आफ्नो सोच, आबश्यकता, आर्थिक अबस्था, स्बास्थ्य अबस्था र खतरा मोल्ने क्षमताको आधारमा मेडिकल बिमा लिने गरेको पाइन्छ !
सबै स्बास्थ्य रहौ ! सधै खुशी साथ बाचौ !